AmaNgqina KaYehova AseAfrika
ESierra Leone: UCrystal ufumana uncedo
ABEMI 1 109 511 431
ABAVAKALISI 1 538 897
IZIFUNDO ZEBHAYIBHILE 4 089 110
Wathandazela Ukufumana Abantu Abangevayo
ESierra Leone, uCrystal, ongumthunywa wevangeli kwintsimi yentetho yezandla, waqalisa usuku lwakhe ngokuthandazela ukufumana abantu abangevayo kwintsimi yakhe. Njengoko wayekhangela ibuyelo ngaloo ntsasa, wahamba ngenye indlela angaqhelanga ukuhamba ngayo. Wabuza abantu basekuhlaleni ukuba ukhona na umntu abamaziyo ongevayo, baza bamkhomba kwenye indlu. Apho wadibana nebhinqa eliselula nelinobubele elaphulaphula kakuhle laza labonisa umdla wokuya kwiintlanganiso zentetho yezandla. Abantu balapho bambuza uCrystal ukuba akafuni ukudibana nomnye umntu ongevayo. Ngoko wafumana omnye umntu othobekileyo ofuna inyaniso. Wayengaqali ukushumayela kwesi sitrato kodwa wayeqala ukubabona bona aba bangevayo. UCrystal uqinisekile ukuba ebengasoze abafumane ngaphandle koncedo lukaYehova.
“La Ntetho Ibiyenzelwe Mna!”
UEmmanuel, ohlala eLiberia, wayesiya kwiintlanganiso zangempela-veki ehamba ngemoto. Wabona kumi ecaleni kwendlela indoda enxibe kakuhle eyayikhangeleka iphazamisekile. Ebona indlela eyiyo le ndoda, uEmmanuel wamisa imoto ukuze abone enoba angayinceda na. Wafumanisa ukuba igama layo nguMoses. Kubusuku obungaphambili yayibelwe yonke imali yayo ibe ngoku yayicinga ngokuzibulala. UEmmanuel wamphulaphula uMoses waza ngovelwano wathi, “Ndicela uye nam kwiHolo YoBukumkani.” Baya bobabini. Oko uMoses wakuvayo kwamchukumisa wade wachiphiza. Emva kokuphulaphula intetho yesidlangalala, uMoses wathi: “La ntetho ibiyenzelwe mna! AmaNgqina KaYehova ahlukile.” Emva kweentlanganiso, uMoses wavuma ukufundelwa iBhayibhile ibe ngoku uya rhoqo kwiintlanganiso.
UAminata ngumntwana wesikolo ona-15 eGuinea-Bissau. Xa wayeneminyaka eyi-13, utitshala wakhe wayalela iklasi ukuba izobe iimask nezinye izinto ezinento yokwenza nemibhiyozo yecarnival. Yena uAminata wazoba indawo eneenkwenkwezi nezityalo waza wawubhala “Paradesi” umzobo wakhe. Xa utitshala wayeqokelela imizobo, waxelela uAminata ukuba umzobo wakhe uphum’ ecaleni waza akamnika manqaku. Emva kwesikolo, uAminata waya kutitshala waza wambuza, “Yayiyeyoobani icarnival?”
Utitshala waphendula wathi, “Yayiyeyabahedeni.”
EGuinea-Bissau: UAminata uzoba “iParadesi”
UAminata wathi: “Mna andingomhedeni, ngoko andibi nanxaxheba kwimibhiyozo enje. Ndikholelwa ukuba uThixo uza kutshintsha lo mhlaba ube yiparadesi, ibe yiloo nto endiyizobileyo.” Utitshala wathi uza kuphinda amenzise olu viwo esebenzisa imibuzo ebhaliweyo. Waba yintoni umphumo? Wafumana amanqaku ayi-18 kwayi-20.
Kweza Abantu Abaninzi
Iqela elikwilali encinci esemagqagaleni eMalawi linabavakalisi abasixhenxe. Bahlanganisana kwindawo abayenze ngeepali, ingca, namakhuko. Bevuselelwe lutyelelo lomveleli wesiphaluka, abazalwana bamema abantu ngenkuthalo ukuba beze kwiSikhumbuzo sokufa kukaKristu. Isithethi sanikela intetho yeSikhumbuzo phantsi kwesibane seoli. Kwakuze abantu abaninzi abanomdla. Unokuyicinga indlela abavuya ngayo abo bavakalisi bayi-7 xa bafumanisa ukuba bekuze abantu abayi-120!
EMalawi: Kwakuze abantu abayi-120
Incwadana Yanceda Umtshato Wakhe
Imiphumo yephulo lokushumayela esidlangalaleni kwizixeko ezikhulu ayiye ikhawuleze ibonakale. ELomé, ikomkhulu laseTogo, elinye ibhinqa laya lithandabuza kwitroli laza lathatha incwadi ethi Ninako Ukonwaba Entsatsheni. Laboniswa ngokufutshane amaEfese 5:3. Banikana iinombolo zefowuni kunye nomzalwana owayekule troli. Kwiiveki ezimbini kamva, eli bhinqa lafowuna laza lathi: “Bendingawathandi amaNgqina KaYehova. Kodwa ndiye ndayifunda le ncwadana ibe ibisemagqabini. Seyindincede kwezinye zeengxaki ebendinazo emtshatweni, ibe nam sendincede ezinye izibini ezibini. Imbono yam ngamaNgqina ibingachananga. Ndicela nize kufunda nam iBhayibhile.” Kwaqaliswa isifundo seBhayibhile kunye neli bhinqa nesinye seza zibini wazincedayo.
IAnkasie yidolophu encinane yaseGhana. Inabantu abathengisayo ecaleni kwendlela. NamaNgqina ke aye abeke itroli qho ngeMivulo. Emva kokushunyayezwa nguSamuel, uEnoch wamkela incwadana ethi Phulaphula uThixo waza wabuza ukuba akho ncwadi anayo yesiKusaal.
EGhana: Waguqulela incwadana kwisiKusaal
USamuel wathi: “Uxolo, asinayo. Kodwa sinazo iincwadana ngesiFrafra,” esisondeleyo kwisiKusaal. Kamva, ngaphambi kokuba uEnoch abuyele ekhayeni lakhe elisemantla, wacela ezinye iincwadi ukuze anike izalamane zakhe.
Ukubuyela kwakhe eAnkasie, wanika uSamuel into ebhaliweyo. UEnoch wayeguqulele incwadana ethi Phulaphula uThixo kwisiKusaal! Uqhubeka esiya rhoqo kwiintlanganiso kwaye efunda neBhayibhile.